Midowga Murashaxiinta oo ku baaqay shir deg deg ah - Caasimada Online
Home Warar Midowga Murashaxiinta oo ku baaqay shir deg deg ah
Midowga Murashaxiinta oo ku baaqay shir deg deg ah
Muqdisho (Caasimada Online) – War-saxaafadeed ka soo baxay Golaha Midowga Murashaxiinta Soomaaliya ayaa walaac xoog leh looga muujiyey jahawareerka iyo hubanti la’aanta xaaladda kala guurka ah ee siyaasadda dalka.
“Goluhu waxuu ku baaqayaa in ay shir degdeg ah isugu yimaadaan, dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka, si looga wada ladlo hirgelinta heshiiskii doorashooyinka ee 17-kii September. Golaha wuxuu taageerayaa soo jeedinta Dawlad Goboleedka Puntland, Jubbaland iyo guddoomiyaha Aqalka Sare ee ahaa in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho, lana ballaariyo ka soo qayb-galayaasha, beesha caalamkana ay goobjoog ka ahaato,” ayaa lagu yiri qoraalka midowga musharaxiinta.
“Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed deganaan iyo ilaalinta sharciga iyo kala danbaynta. Goluhu wuxuu ka digayaa in shacabka lagu dul hayo mas’uuliyiin muddo xileedkoodii dastuuriga ahaa uu dhammaaday,” ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka Golaha Midowga Murashaxiinta madaxweynaha Soomaaliya.